Meydadka illaa 165 ruux oo ku dhintay qaraxii shalay oo galabta la aasay. – Hornafrik Media Network
Shuute oo shaaciyey arrin aan la aqbali karin oo ay sameeyaan xubnaha ka soo baxa…
Meydadka illaa 165 ruux oo ku dhintay qaraxii shalay oo galabta la aasay.
By HornAfrik	 On Oct 15, 2017
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa galabta aasay meydadka illaa 165 ruux, kuwaasoo jirkooda aad u gubtay, lana kala garan waayay, kuwaasoo ku shahiiday qaraxii shalay ka dhacay Isgoyska Zoobe.
Meydadkan oo tan iyo xalay la geynayay isbitaalka ayaa ahaa kuwo jirkooda kala maqnaa, waxaana aad u adkeyd in la aqoonsado, iyadoo dad badan oo eheladooda nolol iyo geeri ku la’aa ay aqoonsan waayeen.
Sidoo kale waxaa jiray meydad kale oo dadkooda ay qaateen, kuwaasoo meelo kale lagu aasay, balse tirade galabta la aasay ayaa haaa kuwii jirkooda aad u gubtay ee laga soo qaaday Isgoyska Zoobe iyo dhismayaasha bur buray
Guddiga gurmadka deg dega ee uu magacaabay Ra’iisul wasaaraha ayaa lagu wadaa inay soo bandhigaan khasaaraha guud ee qaraxa, waxaana wali la heyn tiro rasmi ah, balse dadka ay si horudhac u sheegayaan in illaa labo boqol ka badan inay dhinteen.
Waa qaraxii ugu weynaa ee Taariikhda ka dhaca magaalada Muqdisho, isla markaana ah kii ugu khasaaraha badnaa abid, waxaana qaraxan uu saameeyay ku dhowaad illaa 500-mitir guryaha ka ag-dhowaa halka uu gaariga isku qarxiyay
Madaxweynaha Turkiga oo deg deg u amray in diyaarad caafimaad loo diro Muqdisho.
Daawo Muuqaalka Ninkii Waday Gaarigii 2-aad ee Shalay Qarxay, iyo Xog ku saabsan Ninkaas.